१५,३२,९६,७१,००,००० रुपैयाँको बजेटः बढ्यो बृद्धभत्ता - Postmandu
2019-05-29 2019-05-30 PostmanduLeaveaComment on १५,३२,९६,७१,००,००० रुपैयाँको बजेटः बढ्यो बृद्धभत्ता
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटमा बृद्धभत्ता एक हजार बढाइएको जानकारी दिइएको हो ।
वृद्धभत्ता एक हजार बढेसँगै अब यो वापतको भत्ता अब तीन हजार पुगेको छ। १३ लाख जेष्ठ नागरिकलाई लाभ हुने गरि सरकारले बृद्ध भत्तालाई २ हजारबाट ३ हजार बनाएको हो ।
यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एक हजारले नै बढाएको छ ।
कर्मचारी तलब बढ्यो, कुन पदको कति तलब ?
पानी परेपछि उपत्यकामा यसरी पछारिन्छ बाइक (फोटोफिचर)